Nagu saabsan - ABS jiinyeer
Si buuxda loogu dhex daray fikirka fikirka internetka ee hada jira, oo ay weheliso isdhexgalka kuliyadaha dharka, ilaha wakaalada naqshadeynta hal abuurka, ABS waxay kusii sugnaatay booska hogaaminta ee warshadaha iyadoo lasiinaayo alaab iyo adeeg tayo leh. Shirkad casri ah, waxaan higsaneynaa raadinta natiijooyinka faa'iido wadaagga ah iyo horumarka guud. waxyaabaha ugu muhiimsan ： jiinyeer, badhamada, qalabka qalabka.
Koonfurta Ameerika, Waqooyiga Ameerika, Yurub, Koonfur-bari Aasiya, iyo suuqa gudaha.
in kabadan 1200 macaamiil heer caalami ah iyo kuwa caalami ah.
alaabada lagu dabaqi karo
dharka, kabaha iyo koofiyadaha, boorsooyinka, fadhiga, gogosha, teendhooyinka, bacaha jiifka, dalladda, sahayda safarka ee la isticmaalay.
Liiska 20ka magac ee adduunka ugu caansan. 102 dal oo ka diiwaan gashan sumadda sumadda ABS. In ka badan tiro ka mid ah 100 shatiyada hal-abuurka qaranka, shatiyadaha nooca korontada. Samee hawlo cilmi baaris iyo horumarin soo saar ah oo cusub, kuwaas oo 3 ka mid ah alaabooyin cusub loo marayo aqoonsiga gobolka. Qalabka wax soo saarka caqliga si loo hubiyo waxtarka wax soo saarka, tayada wax soo saarka si loo gaaro heerka Yurub.
Adeegsiga tikniyoolajiyada internetka, garashada kala duwanaanshaha waqtiga Globalisation. Iibsi hordhac ah si macaamiisha loo siiyo horumarin wax soo saar cusub, la-talin iyo xalal, tababar farsamo iyo adeegyo kale oo qiimo leh. Iibinta kadib si ay u siiyaan taageero farsamo macaamiisha, cabashooyinka macaamiisha, soo jeedinta, jawaab celinta iyo hubinta tayada iyo adeegyada kale.